Shirkadda News-saareyaasha | Shiinaha Company News Factory & Shirkado cusub
Kiiska Laptob Ganacsi
Bacda suufka ilmaha beddela
Boorsooyinka dib loo rogay
Bandhigga tooska ah ee 'Canton Fair online' Ku noqoshada dugsiga bag_Magical Sequin, Life sixir
Thanks Canton Fair show online, waxaan ku kulmi karnaa xilligan oo kale. Fiidiyowgaan, waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaagi doonno bacaha cusub ee Back to school SEQUINS. Sida xaqiiqda dhabta ah ee boorsada xirfadleyda ah, waxaan jeclaan laheyn inaan wadaagno waxoogaa macluumaad ah oo ku saabsan qalabka SEQUIN, sida noocyada kala duwan, qiimaha, xadidan iwm.
Boorsada Jelly ee midabka leh iyo boorsada gacanta ee loo yaqaan PVC Rainbow
Safarka Diyaargarowga Safarka ee Abaabulan
Jacaylka safarka, nolosha jacaylka! Iftiinka safarka ee wata alaabada lagama maarmaanka u ah meel xaddidan ayaa ah baahidayada aasaasiga ah. Sidaa darteed, sida loo abaabulo xirmooyinkayagu waa koorso lama huraan ah! Fiidiyowgaan, waxaan jeclaan lahayn inaan kula wadaagno cube-ka safarka ee safarka ah. Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto haddii aad wax ...
Twinkling Star 25 Sano guuradii
Aad bay ugu faraxsan tahay Twinkling Star 25 Sano guuradeed inay timaaddo 2020. Si buuxda ugu mahadnaq dhammaan macaamiisha, shaqaalaha, alaab-qeybiyeyaasha iyo saaxiibbada muddada dheer taageeraya !! Fiidiyowgaan, ma sugi karno inaan ku dhawaaqno SUPER dalab gaar ah oo qof walba loo soo bandhigo !! Macluumaad dheeri ah, fadlan si xor ah u dir boostada info@tkstar.com ....
2020 Showga Canton Fair Online Show_Twinkling Star
Twinkling Star_Magical boorsada booska ayaa loo badalay sariir!
Miyaad la kulantay dhallaanka oohin iyo qaylo laakiin waad ka daashay inaad isku duubto? Ma rabtaa inaad hesho sariir aad ku sii deyso gacmahaaga markaad banaanka joogto? Ma rabtaa inaad soo qaadato dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay markaad bannaanka joogto? Fiidiyowgaan, waxaan jeclaan lahayn inaan idinla wadaagno sida ay tahay hooyadayada sixirka dhabarka ...
Twinkling Star_Dupont Boorsada iyo Boorsada Ganacsi ee Casriga ah
Sideed u aragtaa boorso laga sameeyay "Waraaq" Suurtagal miyaa? Xaqiiqdii, waxaa jira nooc ka mid ah walxaha loo yaqaan 'Dupont Paper', oo sidoo kale loo yaqaan 'tyvek fabric'. Waxay umuuqataa warqad, laakiin waa biyuhu oo bey'ada u roon! Fiidiyowgaan, waxaan ku faraxsanahay inaan kula wadaagno boorso laga sameeyay maaddada Dupont.
Boorsada musqusha ee safarka ee ugufiican | Doorashada bacda qurxinta
Inteena ugu badan waxaan jeclaan lahayn inaan doorto safarka fasaxa. Iftiinka safarka ee wata alaabada lagama maarmaanka u ah meel xaddidan ayaa ah baahidayada ugu sareysa. Marka, sida loo doorto boorso xirmo waa mowduuc aad muhiim u ah. Fiidiyowgaan, waxaa jiri doona xoogaa waasac ah, miisaan fudud oo la awoodi karo boorsada musqusha ee safarka muujineysa, whic ...
cinwaanka 238 # Zhitai Road, Qingmeng Dhaqaalaha & Technical Industrial Area, Quanzhou, Fujian, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Hot Products - Sitemap - amp Mobile
Large dib loo Bag, Dambiisha dib loo Fabric, dib Bag, Eco-Friendly Bag , Non-xidhkii Bag , Dib candho- Shopping Bag,